नयाँ शक्ति आर्थिक विकास र जनजीविकामा केन्द्रित - Ratopati
नयाँ शक्ति आर्थिक विकास र जनजीविकामा केन्द्रित
नयाँ शक्ति निर्माण अभियान नेपाल | कुमार क्षेत्री, केन्द्रीय सदस्य तथा झापा संयोजक
– के हो नयाँ शक्ति निर्माण अभियान ?
– मुलुक संविधान निर्माणपछि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । एक चरणको राजनीतिक आन्दोलन पूरा भयो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । अबको चरण आर्थिक क्रान्ति, समृद्धि र विकासको हो । परिवर्तन संस्थागत गर्नु हो । अब राजनीतिक सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तर, अहिले सत्तामा रहेका दलहरू राजनीतिक गाँठोमा फसेका छन् । अहिलेका राजनीतिक दलबाट आर्थिक समृद्धि असम्भव छ । त्यसैले वैकल्पिक शक्ति आवश्यक परेको हो । त्यही अभियानमा हामी जुटेका छौँ ।
–सैद्धान्तिक, वैचारिक आधार के–के हुन् ?
–औपचारिक रूपमा अवधारणा बनिसकेको छैन । ‘मोटो’ निर्माण हुनेक्रममा छ । पहिलो कुरा त राजनीतिक मुद्दामै हामी केन्द्रित छौँ । धेरै राजनीतिक मुद्दा समाधान भएका छन् । तर, केही अहम् प्रश्न बाँकी नै छन् । अहिलेको सरकार, सडक र सदन एउटैजस्तो देखिएको छ । अबको बहस आर्थिक क्रान्तिको हो । नेपालमा रहेको अथाह जलस्रोतको परिचालन हो । कृषि र हिमाली क्षेत्रको उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुु अबको लक्ष्य बन्नुपर्छ । र, लगानी गर्ने दातालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रहे पनि अहिलेको राज्यसत्ताले यसको सदुपयोग गर्ने तदारुकता देखाएको छैन । नयाँ शक्ति निर्माण अभियान आर्थिक विकास र जनजीविकाको सवालमा केन्द्रित छ ।
– नयाँ शक्ति कस्तो हुन्छ ?
– अहिले बहस चलिरहेको छ । कम्युनिस्टका नाममा साइनबोर्ड टाँगेर व्यापार भएको लामो समय भयो । जनै लगाउने तर आचरण नहुने एउटा पक्ष छ, जनै नलगाउने तर आचरणमा बस्ने अर्काे पक्ष छ । हामी आचरणको पक्षमा छौँ । मूलतः माक्र्सवादको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको अवधारणालाई अंगीकार गरेर आर्थिक समृद्धि र समाजवाद हासिल गर्ने लक्ष्य हो । मार्ग निर्देशक सिद्धान्त यही हुन्छ ।
– एकीकृत माओवादीबाट के नपुगेर बाहिरिनुभएको ?
– कारण प्रस्ट छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली, कमल थापा, चित्रबहादुर केसीलगायतमा केही फरक रहेन अब । किनभने सिद्धान्त बिर्सेएर उहाँहरू एकैठाउँमा पुग्नुभएको छ । त्यहाँबाट जनताको आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तन र विकास सम्भव छैन । संघीयतालाई स्थापित गर्ने मधेस आन्दोलनलाई बाइपास गरिँदै छ । परिवर्तनकारी शक्तिलाई पाखा लगाइएको छ । देश अस्तव्यस्त हुँदै छ । काँग्रेस र एमाले जनआन्दोलनपछि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी प्रणालीमा गए । तर, अहिले पनि हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्ने, संघीयताको विरोध गर्नेसँग प्रचण्ड गठबन्धन गर्न पुग्नुभयो । संघीयताविरोधीको ठाउँमा अहिलेको सरकारमा मधेसकेन्द्रित दल हुनुपथ्र्याे । किनभने मधेसकेन्द्रित दल परिवर्तनबाट उदाएका हुन् । तर, प्रचण्ड पूरै पश्चगमनमा गएपछि डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति निर्माण अभियान थाल्नुभएको हो ।
– एमाओवादीलाई सुधार्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो नि ?
– व्यक्तिगत रूपमा लागेकै हो । सुधार्ने प्रयास पनि गरिएकै हो । पार्टीमा नीति निर्माण तहमै बहस चलाइयो । तर, नेतृत्वकर्ता पार्टी सुधार्ने पक्षमा गएनन् । एमाओवादी लिकबाट बाहिरियो । त्यसैले संविधान निर्माणको स्थितिसम्म सहकार्य गरेर हामी नयाँ शक्ति निर्माणमा जुटेका हौँ ।
– नयाँ शक्ति स्थापित हुन्छ नै भन्ने के ग्यारेन्टी ?
– ग्यारेन्टी छ । अहिले चिया पसलमा, चोक–चोकमा हेर्नुस्, मजदुर, व्यापारीलाई सोध्नुस्, उहाँहरूबाट वर्तमान सरकार र प्रतिपक्षी दलबाट कुनै काम हुँदैन भन्ने सुनिन्छ । गरिबी र बेरोजगारी हटाउन सत्ताधारीले कुनै अवधारणा ल्याएका छैनन् । यो निराशालाई चिर्न नयाँ शक्ति आवश्यक छ । हामी महाभूकम्पको विपत्तिबाट उठेर राष्ट्रनिर्माणमा जुट्ने अवसरमा छौँ । यो अवसरलाई बुद्धिजीवी, कलमकर्मीदेखि तमाम नेपालीले नयाँ शक्तिबाट अगुवाई चाहेका छन् । स्वाधीनताको रक्षा गर्न नयाँ शक्ति निर्माण हुन्छ । र, स्थापित हुन्छ । यसमै जनताको आशा र भरोसा अडिएको छ ।
– एक वैज्ञानिकले अन्वेषण गरेछन् । फूलकोबी र मुला एकैपटक फलाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो भनेर । अनि क्रस गरेर जरामा मुला र माथि फूलकोबी फलाउने अठोट गरे । क्रस गरेर बिरुवा पनि उमारे । तर, तल फूलकोबीको जरा फल्यो, माथि मुलाको पात फल्यो । नयाँ शक्तिमा २२ थरी मान्छे छन् । कतै नयाँ शक्ति पनि तिनै वैज्ञानिकको खोजजस्तो त हुँदैन ?
– सांगठनिक संयोजन सही ढंगले भएन भने नयाँ शक्ति तपार्इंले भनेजस्तै ती वैज्ञानिकको खोजजस्तै हुन्छ । तर, नयाँ शक्तिको खोज र अवधारणा बेग्लै ढंगले गरिँदै छ । काँग्रेस र एमालेमा लागेर भुक्तभोगी भएका, जनताको पक्षमा काम गर्न तत्पर जमात ठाउँ नपाएर भौँतारिएको छ । एकीकृत माओवादीभित्रै पनि अवसरको प्रतीक्षामा ठूलो युवा जमात छ । यो जनशक्तिलाई नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने काममा परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, यता केही पाइयो अब नयाँमा केही पाइन्छ भनेर आएका छन् भने त्यस्ताबाट पार्टी ठीक ढंगले चल्न सक्दैन । हामीले प्रशिक्षणमै राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दा उठाएका छौँ । राजनीतिक स्थायित्व र सुरक्षाले लगानी आकर्षित गर्छ । त्यसैले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणीको पक्षमा हामी छौँ । त्यतिमात्रै होइन, गाई पाल्दा बीमा गरिन्छ भने विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउँदा पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो लक्ष्य नै जनताले माथिबाट फूलकोबीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । र, शासन व्यवस्थाले आफ्नो उत्तरदायित्वको बोध गरी मुलाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
– एकीकृत नेकपा माओवादीको त्यति ठूलो संगठन थियो र त केही गर्न सकेन । तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
– के–के गर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । माओवादी जुन ठाउँमा आइपुग्यो त्यसको नेतृत्व हाम्रो सहयोगमा प्रचण्डले गर्नुभयो । त्यो चरणबाट आर्थिक क्रान्तिको चरणमा पार्टीलाई प्रवेश गराउनुपर्ने थियो । प्रचण्डले सक्नुभएन । डा. बाबुराम भट्टराईले युद्धकालीन संरचनामै पार्टी गयो, यसलाई पुनः गठन गरौँ भन्नुभयो । राजनीतिक सत्ता ध्वस्त पार्ने शक्तिलाई नवनिर्माणमा लगाउनुपर्छ भन्ने भट्टराईको माग थियो । युद्धकालीन संगठनलाई निर्माण र सिर्जनामा लैजान प्रचण्डले अवरोध गर्नुभयो । विकासका कार्य गर्न सक्ने ठूलो शक्ति बाहिर थियो । त्यसलाई समेटौँ भन्ने भट्टराईको प्रस्ताव प्रचण्डले नमानेपछि नयाँ शक्ति बनाउनुपरेको हो । जलस्रोतको विकास, कृषि क्रान्तिजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा बहस गरेर माओवादीलाई रिफाइन गर्नुपर्ने थियो । त्यो भएन । अब नयाँ शक्तिले गर्छ ।
– चुनिएका मानिस भेला हुने र आफू शक्तिशाली बन्ने हो कि जनतालाई नै शक्तिशाली बनाउने ?
– जनतालाई नै शक्तिशाली बनाउने सन्दर्भमा बहस हुँदै छ । नयाँ शक्तिमा एक पद, दुई कार्यकाल, राज्यसत्तामा जनता सार्वभौम र पार्टीमा सदस्य वा कार्यकर्ता सार्वभौम नभएसम्म जनता र पार्टी बलियो हुँदैन । एकीकृत माओवादीमा प्रचण्ड ३० वर्षसम्म अध्यक्ष हुनुभयो । अब भन्नुहोस्, प्रचण्ड शक्तिशाली हुनुभयो कि जनता ? डा. भट्टराईले त प्रत्याह्वानको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । सांगठनिक संरचना कार्यकर्ताबाट चल्नुपर्छ । जनताको विपक्षमा कुनै प्रतिनिधिले काम गर्यो भने उसलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्छ । त्यसैले नयाँ शक्ति जनताको शक्ति हो ।
मधेस आन्दोलन र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतसँग जोडेर हेरिन्छ नि ?
– तत्कालीन ब्रिटिस शासकले नेपालको ठूलो भू–भाग कब्जा गरेको थियो । त्यसलाई बुझाउने काम भीमसेन थापाहरूबाट गजराज मिश्रलाई पठाएर भएको थियो । अहिले सत्तामा जुन जातिको वर्चश्व छ, तत्कालीन समयमा नेपालमा भएका असमान सन्धि सम्झौता क्षेत्री, ब्राह्मण समुदायको अगुवाइमै भएको थियो । सुगौली सन्धिजस्ता राष्ट्रघाती सन्धि अहिलेकै सत्ताधारी पहाडे समुदायका अग्रजबाट भएको थियो ।
त्यतिबेला नेपालको सीमा जोगाउन मध्य तराईका मैथिली समुदायका नागरिक लडेका थिए, थारू लडेका थिए, महिला, अल्पसंख्यक र दलित लडेका थिए । त्यतिबेला पहाडे समुदायका सत्ताधारीले देशमा उपद्रो मच्चाएका थिए । अहिले त सिँगारी पनि हराउने, चितुवा पनि कराउने भनेझैँ भएको छ । हामीले प्रस्ट बुझ्नुपर्छ, कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको मस्यौदा समितिले तराईको आन्दोलनबाट स्थापित समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटायो । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्नेजस्ता मुद्दा छन् । आफू पनि नगर्ने र गर्न खोज्नेलाई भारत वा चीनसँग जोडेर हेर्नुको तुक छैन । डा. भट्टराईको जनपक्षीय नेता हुन् ।
अन्त्यमा के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ ?
राजनीतिमा सबैलाई हेर्यौं । दुई÷चार मन्त्रालय पाउने, दिन कटाउने, काल पर्खिनेमात्रै देखिए । सबै युवालाई स्वदेशभित्रै रोजगारी व्यवस्था गर्नेगरी अवधारणा बन्दै छ । विचलनमा परेको साँस्कृतिक पाटो सुधार्न जुट्नुपर्छ । स्वाभिमानी नेपाली आफ्नै सीप र सिर्जनामा बाँचेका छन् भन्ने सन्देश विश्वलाई दिन नयाँ शक्तिको मिसन सुरु भएको हो । यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।
प्रस्तुति : अशोक अधिकारी